Ilaah ayaa doortay, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Qof kasta oo waligiis loo doorto koox ka qeybgashay ciyaar ama waxkasta oo saameyn kara musharixiinta kale way ogyihiin dareenka la doorto. Waxay ku siineysaa dareenka inaad ku jeceshahay oo aad jeceshahay. Dhanka kale, inteena badan waxaan sidoo kale ognahay waxa kasoo horjeedda ee ah in aan la dooran, waxaad dareemaysaa inaad tahay inaad ilowday oo la diiday.
Eebbe, kan ina abuuray yaa ah oo fahmaya dareemahan, wuxuu ku nuuxnuuxsaday in xulashadiisa reer binu Israa'iil sida dadkiisa loo taxadaray oo uusan ku dhicin shil. Kolkaasuu ku yidhi, Maxaa yeelay, waxaad Rabbiga Ilaahiinna ah u tihiin dad quduus ah, oo Rabbigu wuxuu idiin doortay inaad ahaatid dad hanti badan; (Sharciga Kunoqoshadiisa 5: 14,2). Aayadaha kale ee Axdiga Hore sidoo kale waxay muujinayaan in Ilaah doortay: magaalo, wadaaddo, xaakinno iyo boqorro.
Kolosay 3,12:1 iyo 1,4 Tesaloniika. Waxaan cadeyneynaa in annaguna, sida reer binu Israa'iil, loo doortay sidoo kale: (Dadkiisa) "Taas macnaheedu waa in midkeenna uusan shil ku jirin. Dhammaanteen waxaan halkan ku nahay qorshaha Ilaah. Wax kasta oo uu sameeyo waxaa lagu sameeyaa ulajeeddooyin, jacayl iyo xigmad.
Maqaalkeygii ugu dambeeyay ee ku saabsan aqoonsigeenna Masiixa, waxaan erayga “xulo” meesha iskutallaabta korkeeda. Waa wax aan aaminsanahay inay xuddun u tahay cidda aan ku jirno Masiixa sidoo kalena muhiim u tahay fayoobaanta. Haddii aan ku soconno oo aan aaminsanahay inaan halkaan joogno wax uun oo Ilaah ah ama duubista xuub, aaminsanaanteena ayaa noqota Daallan oo horumarkayagu sida Masiixiyiinta qaangaarka ahi u silco.
Midkeen kastaaba waa inuu ogaadaa oo rumeeyaa in Ilaah na doortay oo magac noogu yeedhay. Isaga iyo aniga ayaa garabka ku dhejiyay oo yiri: "Waan ku dooran doonaa, i raac!" Waxaan ku kalsoonaan karnaa annagoo ogaanayna in Ilaah ina doortay, uu ina jecel yahay, oo uu qorshe u leeyahay midkeen kasta.
Maxaan ku samaynaa macluumaadkan oo aan ahayn dareensiin diiran iyo wareer? Waa aasaaska nolosheena Masiixiyiinta. Ilaah wuxuu inaga doonayaa inaan ogaano inaan ka tirsan nahay, waa nala jecel yahay, waa naloo doonaayey, aabaheenna wuu daryeelaa. Laakiin maahan inaan wax uun sameynay. Sidii uu reer binu Israa'iil ugu sheegay kitaabkii shanaad ee Muuse 7,7: Maxaa yeelay, adigu waad ka tiro badan tahay quruumaha kale oo dhan; oo Rabbigu wuxuu kuu dhigay sidii adiga oo idin doortay; waayo, adigu dadyowga waad ugu wada yar tahay. Sababta oo ah Ilaah wuu jecel yahay, waxaan dhihi karnaa Daa'uud: «Naftaydoy, maxaad u murugaysan tahay, oo aad u xasilloonaanaysaa? Ilaahay sug; maxaa yeelay, weli waxaan isaga uga mahadnaqi doonaa inuu isagu wejigayga yahay badbaadadayda iyo Ilaahay » (Sabuurradii 42,5)!
Sababtoo ah waxaa naloo doortay, waxaan rajeyn karnaa isaga, ku ammaaneynaa oo aan ku kalsoonahay. Waxaan markaa u jeesan karnaa kuwa kale oo u iftiimin karnaa farxadda aan ku haysanno Ilaah.